Nanjary sarotra ny tsy niraharaha ireo mpanafatra filokana, na dia marika tsy kilalao aza. Mety hafahafa izany, ka andao hazavao ny antony. Indostria maro no nijaly noho ny Covid, saingy nipoaka ny filalaovana horonantsary. Vinavinaina ho mihoatra ny $ 200 miliara ny sandany amin'ny 2023, ampitomboin'ny gamer 2.9 miliara eran-tany ny fitomboana amin'ny 2021. Global Games Market Report Tsy ny isa fotsiny no mahaliana an'ireo marika tsy filalaovana, fa ny tontolo iainana isan-karazany manodidina ny lalao. Ny fahasamihafana dia miteraka fotoana azo aseho